SomaliTalk.com » 2014 » January » 11
Home » Archive Maalinta January 11th, 2014
Inta aanan u gelin faalada qoraalkayga, aan idin xasuusiyo dhaqankeena ku salaysan diinta islaamka in uu yahay mid lagu faano. Dhaqankaas oo aan waligay hilmaamayn inkastoo ay iigu danbaysay hoyga dhaqankeena, Soomaaliya, in ka badan 22 sano. Intaa kadib, sida aad ka maqashaan idaacada wararka ama aad ka aqristaan shabakadaha wararka, ama aad ka daawataan idaacadaha wararka ee la iska arko, waxaa...
Maraykanka oo shaaciyay in uu si Qarsoodi ah tiro Ciidama ah ugu Diray Soomaaliya
Xukuumadda Washington ayaa markii u horeeyay shaaca ka qaadday in tiro ciidamada Maraykanka ah oo Khubaro ah loo diray Gudaha Dalka Soomaaliya.Warbixin ay qortay Jariidada Washington Post oo soo xigatay Sarkaal ka tirsan Taliska hawl Galka Maraykanka ee Africom yaa sheegay in tiradan Khubarada Maraykanka ah ee haatan ku sugan gudaha Soomaaliya in shaqadoodu ay tahay talo bixinta iyo tababaridda Ciidamada...
Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ka Digtay in loo Hoggaansamo Bayaankii ay ku jooojiyeen Inter-Net-ka Fiber Optic-ka
War saxaafadeed ka soo baxay WasaaraddaArrimaha Gudaha iyo Amniga qaranka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu cambbaareeyayBbayaankii dhawaan ka soo yeeray Xarakada Shabaab ee ku aadanaa in la joojiyo Isticmaalka Inter Net-ka ee Fabric Optic iyo Mobailka dhinaca Internetka.Sii Hayaha xilka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Cabdikariin Xuseen oo war saxaafadeedkaas ku Saxiixna...
Muwaadinimadu Waqti ay ku Dhacdo Ma Leedahay ? (Expire Date)
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladeeda Hoose ee Muqdisho waxay isla meel dhigeen lagama Maarmaanimada in Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Meelaha ay ka Taliyaan loo sameeyo Waraaqaha Aqoonsiga (National Identity) si Waraaqahaasi gacan uga gaystaan Sugidda Amaanka Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Muqdisho oo markii ugu horaysay gacanta u gashay Hal Maamul ka badan mudo 20 sano ah. Waxay...
Howlaha ugu muhiimsan ee horyaal madaxweyanaha cusub ee Puntland
Hordhac Sida lawada ogsoon yahay waxaa 8-dii janaayo 2014-ka madaxweynaha dowlada goboleedka Puntland loo doortay prof. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Doorashada ayaa u dhacday si aad iyo aad u saraysa, taasoo soo jiidatay indhaha guud ahaan caalamka iyo weliba soomaaliya. Goobjoogayaashii ka socdey guud ahaan aduunka waxaa ay isku raaceen in qaabka doorashada loo agaasimey ay ahayd mid sharaf weyn iyo...
Afar Soomaali ah ayaa ku Geeriyoodey Shil Gaari oo ka dhacay Maraykanka, gobolka IOWA
Wiil & Hooyadiis iyo Habaryartiis iyo gabar ay qaraabo ama asxaab ahaayeen oo ku geeriyoodey shil gaari. Afar qof oo Soomaali ah oo deganaa magaalada Postville ee gobolka IOWA ayaa ku dhintay shil gaari oo Jimcadii (Jan 10, 2014) ka dhacay meel u dhow dhanka Woqooyi ee Magaalada Clermont ee Gobolka Iowa ee dalka Maraykanka, aagga loo yaqaan Fayette County. Shilkan ayaa ka dhacay Highway 18, waxana...